के मेस्सी र रोनाल्डोले एकअर्कालाई प्रेरणा दिन्छन् ?
काठमाडौं – क्रिस्टियानो रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लीगको प्रिक्वार्टरफाइनलमा एट्लेटिको मड्रिडविरुद्ध शानदार ह्याटट्रिक गरेर युभेन्टसलाई अघिल्लो चरणमा पुर्‍याएको एक दिनपछि उनका प्रतिस्पर्धी लियोनेल मेस्सीले लियोनलाई हराउँदै बार्सिलोनालाई क्वार्टरफाइनलमा पुर्‍याउन सशक्त योगदान गरेका छन् ।
एक अर्थमा मेस्सीले रोनाल्डोलाई पनि पछि पारे किनकि उनी चारवटा गोलमा प्रत्यक्ष संलग्न बने जबकि रोनाल्डोको तीन गोल थियो । मेस्सीले दुई गोल उनी आफैंले गरे अनि जेरार्ड पिके र उस्मान डेम्बेलेलाई गोल गर्ने पास मिलाए ।
यस जीतसँगै बार्साले च्याम्पियन्स लीगमा ला लिगाको एक मात्र क्लबका रूपमा अन्तिम आठमा स्थान बनाएको छ । अनि मेस्सीले यस सीजनको शुरूआतमा आफ्ना प्रशंसकहरूलाई सम्बोधन गर्दै सन् २०१५ पछि च्याम्पियन्स लीग जिताउने प्रतिज्ञा गरेकोमा उक्त मिसनमा दत्तचित्त भएर लागेका छन् ।
अनि यसले फूटबल इतिहासमा दुई खेलाडीबीचको सबभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धालाई अघि बढाएको छ । यी अतिमानवहरूले एकअर्कालाई कति हदसम्म प्रेरित गर्छन् भन्ने प्रश्न निकै रोचक छ ।
मेस्सीले रोनाल्डोको जस्तो धेरै नबोलेपनि उनी उत्तिकै प्रतिस्पर्धात्मक भने छन् । गोलसंख्या र व्यक्तिगत सम्मानभन्दा पनि उनी क्लबका लागि ट्रफी जिताउन लागिपर्छन् ।
रोनाल्डो मैदानमा गोल नगरुन्जेल कहिले पनि खुशी देखिँदैनन् । गोल गरिसकेपछि पनि उनी लामो समयसम्म खुशी देखिँदैनन् किनकि उनलाई अर्को गोल गर्ने चिन्ताले घेरिहाल्छ । गोल गर्ने त्यही जुनूनका कारण उनले आफ्नो करीयरमा आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल गर्न सकेका हुन् ।
मेस्सी चाहिँ अलिक फरक धातुले बनेका हुन् । उनी आफैंले गोल गर्ने अवसर पाए पनि क्लबका साथीलाई गोलका लागि पास मिलाइदिन्छन्, प्रायः साथीहरूलाई नै पेनाल्टी हान्ने अवसर दिन्छन् र आफूले गोल गर्दा जसले पास मिलाएको हो उसैतिर मुस्कानसहित फर्केर गोल सेलिब्रेट गर्छन् ।
रोनाल्डोभन्दा राम्रो खेलाडी हुने लक्ष्य मेस्सीले लिएका हैनन् । बरू उनी सर्वोत्कृष्ट रूपमा खेलेर सम्भव भएसम्म सबै ट्रफी जित्न चाहन्छन् भनी उनी नजिकका मानिसले भन्ने गरेका छन् ।
मेस्सी र रोनाल्डोबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा उनीहरूका प्रशंसकको बहसको विषय हो र मिडियाले पनि यसका बारेमा लेखिरहेको हुन्छ तर सम्भवतः यो सही हैन ।
मेस्सीले जानाजान रोनाल्डोसँग प्रतिस्पर्धा नगरेको भए पनि उनी अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक छन् । उनले आफ्नै क्लबका प्रिय साथी लुइस सुआरेजसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । लियोनविरुद्धको खेलमा उनले हानेको पानेन्का पेनाल्टी शायद उनले सुआरेजसँग मिलेर क्याम्प नाओमा निकैचोटि अभ्यास गरेको हुनुपर्छ ।
बुधवार राति गोल नगरेपनि सुआरेजले बार्साको तीव्र गतिको खेलमा योगदान गरेका थिए र मेस्सीसँगको उनको साझेदारी च्याम्पियन्स लीगमा क्लबको निरन्तर प्रगतिको आधारविन्दु हुनेछ ।
च्याम्यिन्स लीगमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई विचार गर्दै उनीहरूलाई अबका केही हप्ताका लीग खेलमा आराम दिइन सक्ने सम्भावना छ । गत वर्ष यस्तै समयमा आफूले थप आराम गर्नुपर्थ्यो भनी सुआरेजले स्वीकार गरेका छन् । त्यतिखेर थाकेको जस्तो देखिएको बार्सिलोना च्याम्पियन्स लीगको क्वार्टरफाइनलको दोस्रो लेगमा रोमासँग ३–० ले हारेको थियो । मेस्सी र सुआरेज यही गल्ती यस सीजनमा नदोहोरियोस् भन्ने विषयमा सजग छन् ।
ला लिगामा दोस्रो स्थानमा रहेको एट्लेटिकोमाथि सात अंकको अग्रता लिएको बार्सिलोनाले मेस्सी र सुआरेजलाई आराम दिएर च्याम्पियन्स लीगका लागि तरोताजा राख्ने प्रशस्त अवसर छ । ला लिगामा सुविधाजनक स्थितिमा रहेकाले बार्साको ध्यान अहिले च्याम्यिन्स लीगमै केन्द्रित हुन पाएको छ ।
तर च्याम्पियन्स लीग जित्नका लागि मेस्सी र सुआरेजले एक प्रतिस्पर्धीलाई पन्छाउनुपर्ने हुन्छ । च्याम्पियन्स लीगको फाइनलमा मेस्सी र रोनाल्डो भिडेको देख्न पाइएला त ?
बीबीसीमा प्रकाशित यान्डी वेस्टको विश्लेषण